Ivolumu encane / emaphakathi / ephezulu - iPandawill Technology Co., Ltd.
Emijikelezweni yasePandawill, samukela imibuzo ye-PCB nganoma iyiphi ivolumu yamabhodi, kusuka kwesekethe elilodwa kuze kufike kumavolumu amakhulu ahlinzekwa ngesikhathi esihleliwe. Njengenjwayelo yonke imizamo yethu ukuqinisekisa ukuthi kungakhathalekile ivolumu, uthola amabhodi alethwe ngentengo yokuncintisana kakhulu nasekulethweni kwesikhathi.
Inqubo yokufunda, ukucaphuna futhi ekugcineni ekunikezeni ama-PCB ayihlukile noma ngabe yivolumu encane noma enkulu futhi siwazisa amakhasimende ngokulinganayo, kepha ama-PCB angumkhiqizo 'wezomnotho wesikali', okusho ukuthi amanani angcono kakhulu angatholakala uma ikwazi ukwenza amaqoqo amakhulu kakhulu.
Kumabhodi amavolumu amakhulu, sinikeza ukukhetha kokulethwa okuhleliwe noma singasiza ngezinsizakalo zokuphathwa kwesitoko ukunikezela inani elifanele lamabhodi ahlobene nohlelo lwakho lokukhiqiza lwenyanga. Siphinde sinikeze ukonga izindleko kulawo makhasimende akulungele ukuthatha i-100% yesitoko ngokushesha njengoba kusizuzisa, futhi sizokwabelana nawe ngaleyo nzuzo.
IPandawill izonikela ngentengo ngokususelwa kumthamo wamabhodi ophelele wonyaka, kepha yehlukanisa inani lokukhiqiza lamavolumu amakhulu kuwo wonke amaqoqo amancane. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi amabhodi aneshalofu lempilo elide kakhulu.
Siyajabula ukukunikeza ngendlela elula kakhulu futhi eguquguqukayo yokuhlangabezana nezidingo zakho.